တရုတ် Nantong Wantong သံမဏိပိုက် - frame ကိုငြမ်းစတိုင်2မှတဆင့် Walk
အလင်းသံမဏိ Keel ပစ္စည်းသည်မြှောင်သံမဏိ
သွပ်ရည်စိမ် EMT Tube
အားပေးမှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး Rectangular သံမဏိပိုက် welded high ကြိမ်နှုန်း
သွပ်ရည်စိမ်က Round သံမဏိပိုက် welded high ကြိမ်နှုန်း
သွပ်ရည်စိမ် Square ကိုသံမဏိပိုက် welded high ကြိမ်နှုန်း
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်း rectangular သံမဏိပိုက် / Black ကစတုဂံပုဒ်မသံမဏိပိုက် welded
က Round သံမဏိပိုက် / က Black က Round ပုဒ်မသံမဏိပိုက် welded high ကြိမ်နှုန်း
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းစတုရန်းသံမဏိပိုက် / Black ကစတုရန်းပုဒ်မသံမဏိပိုက် welded
သံမဏိ-ပလပ်စတစ် Composite ပိုက်
ဂိတ် Frame ကငြမ်း
မိုးသည်းထန်စွာ Duty H ကိုဘောင်ငြမ်း
လှေကား Frame ကငြမ်း
Frame က Scarffolding မှတဆင့် Walking
ရိုးရှင်းသော Single-span စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ်
ရိုးရှင်းသော Single-span စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ် LCHD
multi-Span စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ် GLW-6
multi-Span စိုက်ပျိုးရေးဖန်လုံအိမ် GSW-7
frame ကိုငြမ်းစတိုင်2မှတဆင့် Walk
high frequency ကိုသွပ်ရည်စိမ်စတုရန်းသံမဏိပိုက် welded
high frequency ကိုသွပ်ရည်စိမ်ပတ်ပတ်လည်သံမဏိပိုက် welded
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ဟိုင်း / Nantong
MOQ: 10 တန်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်စွမ်း: တစ်လလျှင် 5000 တန်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းကမ်းချက်များကို: စသည်တို့ကိုမျက်မှောက်မှာ T / T, L ကို A / C
ပူးတွဲ pin ကို Caster လက်ဝါးကပ်တိုင်သတ္တုအထိမ်းအချုပ်
ချိတ်တွေနဲ့သံမဏိပျဉ် Lock ကို pin ကို တွယ်အပ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီလုံခြုံပြီးယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းငြမ်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူဖောက်သည်များကိုပြည်ပမှာအိမ်မှာငြမ်းစျေးကွက်အပေါ်အာရုံ, ငြမ်းထုတ်ကုန် R & D, ဒီဇိုင်း, ထုတ်လုပ်မှု, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကဝန်ဆောင်မှုပေါင်းစပ်ပြီးနှင့်။
အဓိကထုတ်ကုန် disc ကိုငြမ်းစနစ်, disc ကိုထောကျပံ့စနစ်, သံမဏိပိုက်ဆွဲထားငြမ်းစနစ်, တံခါးကိုငြမ်းစနစ်, ပန်းကန်ထိကပေါက်ငြမ်းစနစ်, ကြယ်ပွင့်စီးရီးငြမ်းစနစ်, သံမဏိ Springboard, သံမဏိထောက်ခံမှု, ဝက်အူများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များဖြစ်ကြသည်။
1) မြင့်မားတဲ့အကာအကွယ်အမှုန့် coated technique ကိုက၎င်း၏သက်တမ်းပိုရှည် 3-5 နှစ်ကထက်ကိုအတွင်းအပြင်နှင့်ပြွန်၏အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်နှစ်ခုလုံးအတွက်သံချေးများနှင့်ချေးမှငြမ်းကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းများနှင့်အတူ equiped လျှင် 2) Poly အလုပ်လုပ်တဲ့ငြမ်းအတွင်းပိုင်းနှင့်အပြင်ပန်းနှစ်ဦးစလုံးဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့သောစသည်တို့ကို caster ဘီး, jack ကိုအခြေစိုက်စခန်းဦးခေါင်းကိုလျက်, အဖြစ်
ငြမ်းတစ် set ကိုအောက်ပါပစ္စည်းများလိုအပ်သည်:
1.Scaffolding သံမဏိပျဉ်: တစ်ခုမှာ
2.Main ဘောင်: နှစ်ဦး
3.Joint pin ကို: လေး
4.Lock pin ကို: လေး
5.Cross သတ္တုအထိမ်းအချုပ်: လက်ဝါးကပ်တိုင်မသန်စွမ်းပဲနှစ်ခုအားလုံးအတွက်
ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကိုအဆောက်အဦ, ခန်းမ, တံတား, viaduct, ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဖြစ်မြင့်မားသောအလုပ်ပလက်ဖောင်းမှ 1.Apply,
2. အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပငြမ်းခြံစည်းရိုးမှ Apply ။
3. ထိုကဲ့သို့အီလက်ထရောနစ်စက်ပစ္စည်း, ထည်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်အခြားအလှပြင်ဆင်ရေးစီမံကိန်းများအဖြစ်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်ပလက်ဖောင်းများအတွက်အသုံးပြုခြင်း။
Delivery အချိန်: တစ်ဦးချင်းစီအမိန့်များ၏အရေအတွက်နှင့်သတ်မှတ်ချက်အရ
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်စွမ်း: တစ်လလျှင် 5000 အစုံ
ယခင်: မိုးသည်းထန်စွာတာဝန် H ကိုဘောင်ငြမ်း
နောက်တစ်ခု: frame ကိုငြမ်းစတိုင် 1 မှတဆင့် Walk
အဆုံး Frame ကငြမ်း
အီသီယိုးပီး Frame ကငြမ်း
H ကို Frame က
အကြီးစား Duty Frame ကငြမ်း
High Quality frame ကငြမ်း
ပင်မ frame ကငြမ်း
Mason ဆို Frame ကငြမ်း
ခြယ် frame ကငြမ်း
ခြယ် frame ကငြမ်း Shoring
tubular သံမဏိ Frame ကငြမ်း
Frame ကမှတဆင့် Walk
မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းစတုရန်းသံမဏိပိုက် / Black က s ကို welded ...
သွပ်ရည်စိမ် EMT ပြွန်
က Round သံမဏိပိုက် / က Black Ro welded high ကြိမ်နှုန်း ...
နေရပ်လိပ်စာ: No.19 XingHu လမ်း, Hai'an စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဇုန်, Nantong စီးတီး, Jiangsu သု။ PRChina